फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - फेसबुकमा हरियो सारी र फुलेको दारी !
फेसबुकमा हरियो सारी र फुलेको दारी ! मिलन तिमल्सिना
पुलिस चौकीमा केस नपर्दासम्म र घरको चौकोसमा ठेस नलाग्दासम्म कुर्सीमा अढेस लागिलागि फेसबुक चलाउने बानी लागिहाल्यो ।
नानीदेखि नै मोबाइलमा चल्ने र कुरा छल्ने लत बसेपछि के गरौँ र कसो गरौँ मात्रै भैरहने ! आफ्नो फेस र भेष आफैलाई मन नपरेपछि फेसबुकमा अरुको फेस र भेष हेरेर फोटो बिगार्ने चलन पनि नौलो हुन छाड्यो ।
कपाल फुल्न थालिसकेका बाउको अनुहार त दुई चार दिनमै हुने यस्तै हो, नौलो भएन । फेसबुकले नदेखाए पनि केही दिनमा अरुले उनको चाउरे अनुहार देखिहाल्छन् । मान्छे बुढो उमेरमा बुढै भएछ भनेर बुझिहाल्छन्, चिनिहाल्छन् । तर २५(३० वर्षको लक्का जवान छोरोलाई पनि फेस बिगारेर बनाएको ८०(९० वर्षको चाउरिएको र खुइलिएको अनुहार अहिल्यै देखाउने अचम्मको सोख जाग्यो ।